Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Foods for Heart နှလုံးအတွက် အာဟာရ
Foods for Heart နှလုံးအတွက် အာဟာရ
ဆေးပညာစာတွေကို အနောက်နိုင်ငံတွေကနေ သုတေသနလုပ်ကြ၊ ရေးကြတာများလို့ သူတို့စားတာတွေ။ သူတို့သိတာတွေသာ ပါတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအစားအစာ ၂ ဒါဇင်ကသာ ကောင်းတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ ဒီလို ကောင်းတာတွေရော ဒိထက် ကောင်းတာတွေပါ ကိုယ့်ဆီမှာလဲ ရှိနေ စားနေကြတယ်လို့ ယူဆစေချင်ပါတယ်။ ဆိုပါစို့ ကျွန်တော်တို့ စားသုံးနေကြတဲ့ နာမည် အမျိုးမျိုးနဲ့ ပဲတွေလဲ သူတို့ပြောတဲ့ ပဲနက်လိုကောင်းပါမယ်။ သူတို့ဆီမှာ ဝိုင်အနီကို မသောက်သူမရှိတဲ့ပြင် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း များစွာတန်တဲ့ စီးပွါးရေးလဲဖြစ်လို့ ကောင်းတာကို လိုက်ရှာရေးနေကြတယ်။ ဝိုင်ကို မြင်တောင် မမြင်ဘူးသူတွေက ဝိုင်သောက်နေသူတွေထက် နှလုံးကျန်းမာရေး ကောင်းနေတာတွေ ရှိပါတယ်။
ဆား၊ အဆီ နဲ့ (ကိုလက်စထော) တွေကို ကျစေတာမှန်သမျှ နှလုံး-ကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်းတယ်။ အစေ့အဆံတွေ၊ အမွှေးနံ့သာအတွက် သုံးတာတွေ၊ ဘယ်ရီသီးတွေနဲ့ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်အထိ ကောင်းတာတွေလို့ အကြမ်းပြောရင် ရတယ်။ Heart disease နှလုံးရောဂါ၊ Stroke နှလုံးနဲ့ဆက်ဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်-သွေးကြောရောဂါ၊ Blood pressure သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ (ကိုလက်စထော) များတာနဲ့ ဆီးချိုရောဂါအတွက်ပါ ကောင်းမှာ ဖြစ်တယ်။ Rosemary ဟင်းခပ်အမွှေးအကြိုင်တမျိုး၊ Sage သာဂူရွက်၊ Oregano တောရုံးပင် နဲ့ Thyme စမုန်ဖြူတွေထဲမှာ Antioxidants (အင်တီ-အောက်စီဒင့်) တွေပါနေတယ်။ သပ်သပ်ရေးထားပါသေးတယ်။
2. Black Beans ပဲနက်
3. Red Wine ဝိုင်နီ
4. Salmon (ဆယ်လ်မွန်) ငါး
5. Tuna (ကျူနာ) ငါး
6. Virgin Olive Oil (အောလစ်ဖ်) ဆီ
သံလွင်ဆီမှာ Polyphenols (ပေါ်လီဖီနောလ်) ခေါ်တဲ့ Antioxidants (အင်တီအောက်စီဒင့်) တွေ ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတဲ့ Monounsaturated fats အဆီအမျိုးအစားလဲ ပါတယ်။
7. Walnuts သစ်ကြားသီး
တနေ့မှာ လက်တကုပ်စာ တအောင်စခွဲလောက် စားပေးပါ။ (ကယ်လိုရီ) ၃ဝဝ ရမယ်။ Cholesterol (ကိုလက်စထော) ကျစေမယ်၊ နှလုံးက သွေးကြောလေးတွေ ရောင်နေတာလဲ သက်သာစေမယ်။ သစ်ကြားသီးမှာ Omega-3s, Monounsaturated fats တွေနဲ့ Fiber တွေပါတယ်။
8. Almonds ဗာဒံစေ့
9. Edamame ပဲပုပ်
Soybean ပဲပုပ် မရင့်သေးတာကို ပြောတာပါ။ Cholesterol (ကိုလက်စထော) ကျစေတဲ့ Fiber (ဖိုင်ဘာ) ပါတယ်။ သွေးဆုံးချိန်အတွက် ကောင်းတာကို ရေးထားပါတယ်။
10. Tofu တို့ဖူး
11. Sweet Potatoes ကန်စွန်းဥ
12. Oranges လိမ်မော်သီး
13. Swiss Chard (ဆွစ်-ချတ်) အရွက်
14. Carrots မုံလာဥနီ
15. Barley (ဘာလီ)
ဖြူနေအောင် ချွတ်မထားတဲ့ အစေ့အဆံက ပိုကောင်းတယ်။ (ကိုလက်စထော) ကို ကျစေတယ်။ သကြားဓါတ် နည်းစေတယ်။
16. Oatmeal အုတ်စပါး
17. Flaxseed နှမ်း
18. Low-Fat Yogurt အဆီနည်း (ရောဂတ်)
19. Foods Fortified With Sterols (စတာရောလ်) ပါအစာ
20. Coffee and tea ကော်ဖီ နဲ့ လက်ဖက်ရည်
21. Cayenne Chili Pepper ငရုတ်သီး (အရောင်တင်မှုံ့ အစစ်)
(အင်စူလင်) ဟော်မုန်း တိုးစေလို့ ဆီးချိုအတွက်ကောင်းတယ်။ အဝလွန်သူတွေလဲ သုံးသင့်တယ်။
22. Kosher Salt (ကိုရှာ) ဆား
23. Cherries ချယ်ရီသီး
24. Blueberries (ဘယ်ရီ) သီး
Anthocyanins (အင်သိုစိုင်ယာနင်) ခေါ်တဲ့ (အင်တီ-အောက်စီဒင့်) ပါတယ်။ Ellagic acid (အယ်လားဂျစ်-အက်စစ်)၊ Beta-carotene (ဘီတာ-ကယ်ရိုတင်း)၊ Lutein (လူတိန်း)၊ Vitamin C (ဗီတာမင်-စီ) Folate (ဖေါလိတ်)၊ Magnesium (မက်ဂနီစီယမ်)၊ Potassium (ပိုတက်စီယမ်) နဲ့ Fiber (ဖိုက်ဘာ) တွေလဲ ပါတယ်။